मधेश मुद्दा झन् स्थापित भएको छ : डा. भोगेन्द्र झा (राजनीतिक विश्लेषक)
० असार १४ गते हुने चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी भइरहेको छैन । भनेपछि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा राजपाको भविष्य के होला ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टी एउटा प्रतिक हो । मधेशका जुन मुद्दाका लागि विद्रोहहरू भए, ती विद्रोह अहिले पनि निरन्तर छन् । त्यसैको निरन्तरता नै राजपाको चुनाव बहिष्कार हो । राजपाले मधेशका लागि मात्र होइन सबै उत्पीडितका मुद्दालाई उठान गरेको हो । निर्वाचनको विजय पराजयले कसैको भविष्यलाई निर्धारण गर्न सक्दैन । राजपा निश्चित रूपमा चुनाव बहिष्कार गरेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा गरेको हो । राजपाको बहिष्कार नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । म एमालेलाई पनि सत्ता पक्ष नै ठान्छु । तीनवटै ठूला दल सत्ता पक्ष हुन् । राज्यले व्यापक सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर चुनाव गराउन सक्छ । राजपाले बहिष्कार गरेको अवस्थामा उसको पकड क्षेत्रमा अन्य दलले मत पाउनुले राजपालाई कमजोर भएको मान्न सकिँदैन । यसले गर्दा राजपाले उठाएको मुद्दा कमजोर हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नु गलत हो । यस्तो विश्लेषणले राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । राजपाले चुनाव बहिष्कार गर्दा उसले उठाएका मुद्दा झन् सबल हुन्छ । तर, राजपाले चुनाव बहिष्कार नगरेको भए उसको राजनीति समाप्त हुन्थ्यो ।
० राजपाको भविष्य वैद्य माओवादीको जस्तो हुने भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ नि ?
— आ–आफ्नो सुविधाअनुसार विश्लेषण गरिँदैछ । निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । वैद्य समूह निश्चित रूपमा जनयुद्ध गरेर आएको समूह हो । राजपाले चुनाव गर्नु उसको बाध्यता हो । राजपा चुनावमा सहभागी चाहन्थ्यो । तर, राजपाका लागि सरकारले वातावरण बनाउन सकेन । वैद्य माओवादी आफैं बाहिर बसेको थियो । तर, राजपालाई बाहिर बस्न बाध्य पारिएको छ । यदि राजपाले उठाएको मुद्दा औचित्यपूर्ण होइन भने पटक–पटक चुनाव सार्नुको मतलब के ? पटक पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुको औचित्य के ? संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नुको औचित्य के ? राज्यले राजपाका मुद्दालाई पछि धकेल्ने चेष्टा मात्र गरेको हो ।
० राजपाले चुनावमा अवरोध पु¥याउने चेतावनी दिएपछि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यसलाई के कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य हो । तर, कुन लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रमा लोकको मतको मर्यादा हुन्छ, मतको मूल्य बुझिन्छ । यदि राजपाको माग औचित्यपूर्ण थिएन भने पहिलो चरणमा तीन वटा प्रदेशमा मात्र किन चुनाव गराइयो । प्रस्तावित प्रदेशहरू गम्भीर रूपमा विवादित छन् । दुई चरणमा चुनाव गर्नुको औचित्यलाई ओझेलमा राखेर फेरि असार १४ गते चुनाव हुन गइरहेको छ । मधेशलाई ब्यारेकमा परिणत गरी निर्वाचन गराउन सकिन्छ । तर, त्यसको प्रतिफल सकारात्मक होइन, नकारात्मक हुन्छ ।
० राजपाको विरोधका बाबजुद असार १४ गते चुनाव भयो भने नेपालको राजनीतिमा के कस्तो नकारात्मक असर पर्छ ?
— राजपा अहिंसक आन्दोलनमा छ । राजपाको हिंसाको समर्थक होइन । यस्तो अवस्थामा हिंसक रूपमा प्रस्तुत हुने राज्यका अगाडि राजपा अल्पकालीन रूपमा पराजित भएको देखिन सक्छ । अहिले चुनावलाई संविधानको कार्यान्वयनको पाइलाका रूपमा लिइएको छ । तर, त्यो चुनावमा बहुसंख्यक नागरिकताको संलग्नता हुँदैन भने संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? अर्को कुरा, अब प्रदेशको चुनाव गराउने पनि कुरा चल्दैछ । जुन प्रदेशको सीमाङ्कनमा विवाद छ, नामाकरण गरिएको छैन, राजधानी तोकिएको छैन ती प्रदेशमा चुनाव गराउनु भनेको मुलुकलाई झन् संकटमा पार्नु हो । अहिले स्थानीय तहमा द्वन्द छ भने भोलि प्रदेशका विभिन्न कुरालाई लिएर द्वन्द हुन्छ । यी द्वन्दले दीर्घकालीन द्वन्दलाई आमन्त्रित गर्नेछ । बहिष्कृत वर्ग शक्ति संचय गर्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन होइन संविधानको बहिष्कारकै कुरा पनि उठ्न सक्छ ।
० प्रदेश नम्बर २ को चुनाव असोज २ गते र अन्य प्रदेशको चुनाव असार १४ गते गरेर मधेशलाई ८ जिल्लामा सीमित पार्ने काम गरेको भनेर पनि सरकारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— प्रस्तावित दु नम्बर प्रदेशको चुनाव तेश्रो चरणमा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । शासकहरूले यी आठ जिल्लालाई देशको मूलप्रवाहबाट अलग पार्न खोजेका छन् । यी आठ जिल्लाका नागरिकले आफूलाई समग्र मधेश र नेपालसँग जोडेका छन् । तर, सत्ता सञ्चालकहरूले यी आठ जिल्लालाई छुट्याउने कुचेष्टा गरेका छन् । राज्यले विखण्डन चाहने शक्तिलाई मलजल दिने काम गरेको छ । केही मधेशकेन्द्रित दलहरू आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनाउन निर्वाचनमा गएका छन् । ती दलहरूले विगतमा मधेश अधिकारका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए । केही मधेशी दल चुनावमा जानुलाई राज्यले आफ्नो सफलता मानेको छ भने त्यसलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । कुनै बेला माओवादीले पनि तत्कालीन सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेको थियो । तर, तत्कालीन बेलाको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले माग पूरा गरेन । त्यसकै परिणाम स्वरूप १० वर्षसम्म जनयुद्ध भयो । त्यसकारण मधेशका मागप्रति राज्य संवेदनशील बनेन भने अर्को द्वन्दको श्रृजना हुन्छ ।
० एकातर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव यही माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अर्कोतर्फ दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव असोजमा सारिएको छ । यसो किन गरिएको होला ?
— नेपालका राजनीतिकर्मीका लागि कुनै बाध्यात्मक अवस्था हुँदैन । उनीहरू २०७४ होइन ७५ सालसम्म सार्न सक्छ । आफ्नो स्वार्थअनुसार ठूला तीन दल मिलिहाल्छन् । जति मन लाग्छ उति सार्न सक्छन् । आफ्नो इच्छाअनुसार व्यवस्थापिका संसद्को म्याद थप्न सक्छन् । मधेशका मुद्दालाई शिथिल पार्न प्रदेश नम्बर २ को चुनाव धकेलिएको हो । तर, ठूला दलले बुझेका छैनन्, कि कसैले चाहँदैमा मुद्दा ओझेलमा पर्दैन ।
० संविधान संशोधनको विषयमा ठूला दलहरूले के सोचिरहेका छन् ?
— ठूला दलले वञ्चित वर्गलाई अधिकार नदिने सोच बनाएर हिडिरहेका छन् । यसले गर्दा मुलुक झन् चर्को द्वन्दमा फस्छ । नेपालले दुर्भाग्य हेर्नु नपरोस् । बेलैमा सद्बुद्धि पलाएन भने मुलुक गहिरो द्वन्दमा फस्छ ।
० मधेशका लागि संघर्ष गरिरहेका मुख्य दलहरू छुट्टा छुट्टै बाटोमा हिड्नुलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । मधेश मुद्दालाई अगाडि बढाउनमा उपेन्द्र यादवको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, चुनावमा जाने र त्यसपछि संघर्षलाई निरन्तरता दिने यादवजीको तर्क कुतर्क मात्र हो । उहाँले केही महिनाअघिसम्म संविधान संशोधन मात्रले हुँदैन पुनर्लेखन हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको थियो । एक रातमै उहाँमा दिव्यज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो, कि चुनावलाई हामी प्रयोग गरौं । विकास एजेण्डा हो, तर पहिचानलाई थाँती राखेर विकास हुँदैन । विकास मात्रले समस्याको समाधान हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा त विकास हुने सम्भावन पनि छैन । जहाँ द्वन्द हुन्छ, त्यहाँ विकास हुँदैन । स्वशासन भएपछि यहाँका जनता विकासप्रति जागरूक हुनेछन् । दुई सय वर्षको विकास प्रक्रियालाई २५ वर्षको विकास प्रक्रियाले उछिनेको विश्वमा यस्ता कैयौं उदाहरण छन् । त्यसैले अधिकार स्थापित गरेर विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।